समूह "टोक्यो होटल" - यी केटाहरू 2007 बाट "जन्मे" हो, जब किशोर किशोरावस्थाका मानिसहरू भावनात्मक लडाइँ र युवा रक संगीतको लागि पागल भए। कम्तीमा, उनीहरूले धेरै सम्झना राखेका छन्, र90 मा जन्मेको जो कोहीले यो भन्नेछ, तर अब उनी आफ्नो विद्रोही युवालाई हँसिलो सम्झाउँछन्। तर योर्डमा पहिले देखि नै 2015 हो र समूह "टोक्यो होटल", यो देखिन्छ, सबैलाई आफ्नो करियर पूरा गर्न जाँदैछ। केटाहरू ठूलो भए र उनीहरूको शैली परिवर्तन गरे, र उनीहरूले गीतहरू बढी इलेक्ट्रोनिक ध्वनि प्राप्त गरे। के यो राम्रो छ? प्रशंसकहरू न्याय गर्न। खैर, हामी उनीहरूको इतिहास सम्झनेछौं, तिनीहरू के थिए र तिनीहरूले के गरे।
एक समूह सिर्जना गर्दै
पहिलो पटक समूह "टोक्यो होटल" आफैले बाह्र वर्षअघि, दूर 2003 मा घोषणा गरेको छ, यसको नयाँ उत्पादक - पीटर होफमैनको फुर्सद अन्तर्गत सार्वभौम संगीतको हैम्बर्ग शाखासँग सम्झौता भएको छ।
समूहमा "टोक्यो होटल" चार व्यक्ति, जसमध्ये दुई दुईवटा विधेयकहरू र टिम कलिट्ज (क्रमशः अग्रता र गिटारवाद) हुन्,9वर्षको उमेरमा एक संगीत क्यामेरामा संलग्न छन्।
2001 भाइहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। तिनीहरूले म्याग्देबर्गमा प्रदर्शन गरे र ब्यान्डको भविष्यको दोस्रो भागसँग मिले - एक ड्रमर र बास प्लेयर, गुटव शेफर र जर्ज लिस्टिङ, लगभग प्रतिभाशाली जुत्ताहरू जस्तै। उत्तीर्ण, रास्ते मा, समूह को सबै भन्दा पुरानो हो - उहाँ 1987 मा जन्मिए। शेफर उनको उमेर (1988) भन्दा एक वर्षको उमेरमा छ, र जुत्ता 1988 मा 19सेप्टेम्बरमा जन्मेका थिए र टम मात्र बिल भन्दा बढी दस मिनेट भन्दा बढी हुन्छ।
यो चार केटा समूह "टोक्यो होटल" को सदस्य हुन्। वर्ष 2015 ले उनीहरूलाई पनि असर पार्दैन - उहाँ अझै पनि त्यहि हुनुहुन्छ। तर संगीतकारहरूले आफैं परिवर्तन गरे - उनीहरूको उपस्थिति, संगीत र शैली। तर सबै क्रम मा।
2005: क्यारियरको सुरुवात
2005 मा, कुनै पनि अरूलाई यो समूह "टोक्यो होटल" थाहा थिएन। उनको जीवनी केवल यस अवधि मा शुरू हुन्छ। दुई वर्षको अस्तित्वको लागि, पीटर होफमनको सख्त पर्यवेक्षणको क्रममा, मानिसहरूले सम्पूर्ण एल्बम रेकर्ड गरेका थिए (एकलवादी विधेयक गीतहरू लेखनमा सक्रिय भाग लिइन्)।
तर समूह भन्दा पहिले "चकलेट फेंक", एकल डर्च डेन्सोन र उनको लागि एक भिडियो क्लिप जारी। तीरले लक्ष्यलाई हिटयो, र समूह समूह इको र 1 लिभ र कमेन्ट पनि ल्याए। यो भिडियो क्लिप Schrei ("स्क्र्रीम") पछि, जुन युरोपियन चार्ट मा पहिलो स्थान लिइएको थियो।
Schrei को पहिलो एलबम को रिलीज केवल सफलता को मजबूत बनाइयो र "टोक्यो होटल" लाई अपेक्षित महिमा लाई लाया।
2006: दोस्रो एल्बम र पहिलो संगीत कार्यक्रम
2006 नयाँ भावना-रक बैंडको प्रसन्न प्रशंसकहरू बसोबास गर्दै थिए, किनभने यस समयमा त्यहाँ "टोक्यो होटल" अर्को भिडियो क्लिप भएको थियो, गीत रेटटे माइकको लागि यो समय।
रचना नयाँ थिएन, तर पहिलो एल्बमबाट परिमार्जित गरिएको: "टोक्यो होटल" समूहको एकलौट आवाजमा एक ब्रेक अनुभव भयो, यसबाहेक, गीतले केही सहायक मतभेद देखाए।
दोस्रो एल्बम पनि बिल्कुल ताजा थिएन: यसमा तीन नयाँ गीतहरू र केहि पुनः रेकर्ड भएका पुरानो व्यक्तिहरू थिए। यो मार्च मा Schrei: So Laut Du Kannst को तहत रिलीज भएको थियो। मूल संस्करणमा एकल डेयर आइपेज ट्याग पनि जारी गरियो।
तर धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मातृभूमि बाहिरको पहिलो संगीत कार्यक्रम थियो: नोभेम्बर 18, "टोक्यो होटल" समूह (फोटोमा लेखिएको छ) मस्को गए। चट्टानको दृश्यमा न्यु योर्कहरू गर्मी भन्दा बढी लिइन्। दुई वर्षसम्म सङ्गीतकारहरूले मात्र जर्मन श्रोताहरूलाई विजय हासिल गरेनन्।
2007: शुभ फलफूलको महिमा
फेब्रुअरी 2007 मा "टोक्यो होटल" समूहले एल्बम जिमर 483 ("कोठा 483") जारी गर्यो, जसले संगीतकारहरू अझ धेरै लोकप्रिय बनाउँछ। अप्रिलमा, बच्चाहरू यूरोपको यात्रा सुरु - 483 टूर। तिनीहरू पनि एक पटक फेरि मास्कोको यात्रा तिर्छन्, र त्यसपछि सेन्टिन्टरबर्गमा एक कन्सर्ट संग आउछन्। चिल्ला (स्कीइको अंग्रेजी संस्करण) प्रारम्भिक गर्मीमा आउछ।
नवंबरमा मानिसहरू जर्मनीमा सफल भ्रमण भन्दा धेरै बढी छन्।
2008: पहिलो बाधाहरू
वर्ष 2008 ले समाचार ल्याएको छ कि प्रशंसकहरु को मूड क्लाउड गरियो: बिल को बीमारी को कारण, बैंड ले संगीतहरु लाई बंद गर्यो। "टोक्यो होटल" को फ्रंटमैन ले लेरीन्गाइटिस (लारीन को सूजन) उठायो। सौभाग्य देखि, सबैले काम गरे, र मुखरका शब्दहरूमा मार्च अपरेशनले सबै समस्या समाधान गर्यो। प्रशंसकहरू आनन्दित भए र नयाँ उपलब्धिहरूको आशा गर्थे।
यो वर्ष नयाँ एल्बम - ह्युमेइडको रिलीजको वर्ष थियो। कुनै आश्चर्य छैन कि प्रशंसकहरू आफ्नो मनपर्नेको नयाँ सन्तानको लागि पर्खिरहेका थिए। नोभेम्बरमा "टोक्यो होटल" को रचनात्मकता एक पटक फेरि आधिकारिक रूपमा मनाइएको थियो: एमटीवी युरोप संगीत पुरस्कारमा, संगीतकारहरूले "बेस्ट ग्रुप" नामाकरण गरे। यो पुरस्कार अझै सम्म कुनै जर्मन समूह द्वारा प्राप्त भएको छैन ।
2010: पहिलो विश्व भ्रमण
2010 मा एल्बम परिचय गर्दै, समूह विश्व भ्रमणमा जान्छ Humanoid City मा स्वागत छ। भ्रमण अघिल्लो भन्दा भन्दा ठूलो थियो। "टोक्यो होटल" एशियाका देशहरूमा भ्रमण गर्नुभयो। यसको अतिरिक्त, उनको लागि लेखक को वेशभूषा को लागि विशेष रूप देखि तैयार बच्चाहरु DSquared।
2011-th: अचानक ढिलो
"टोक्यो होटल" क्षितिजमा विजय हासिल गर्न र कुकुरहरू विजय हासिल गर्न, पहिले कुनै पनि जर्मन कलाकारको लागि पहुँच योग्य छ, तर तिनीहरू थकित देखिन्छन। यस वर्षको MUZ-TV पुरस्कार समूहलाई हेडलिनरको रूपमा छनौट गर्यो, किनभने फेरि एकपटक उनीहरूको भ्रमणमा मस्को खुसी भए।
तर 2014 सम्म यो समय देखि, समूहमा ढिलो थियो।
2014-th: सेवामा फर्कनुहोस्
2014 मा, "टोक्यो होटल" तपाईंलाई माया राख्ने प्रेमको लागि नयाँ भिडियोको साथ फर्केर आउनुभयो। सङ्गीतकारहरूको शैलीले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। भावना-चट्टानबाट खेलाडीहरू इलेक्ट्रोनिक ध्वनिको साथ पप-चट्टानमा बदलिए। यद्यपि, यसको लागि पूंजीकरण एकल स्वचालित मा, 2011 मा रिहाईएको सुनेका थिए।
लस एंजिल्सका भाइहरू द्वारा आयोजित, रिट्रिट बेकार थिएन, र 2014 मा आउनुभयो र उनीहरूको नयाँ एल्बम - उपबर्बियाको राजाहरू।
बाहिर जाने वर्षमा साथीहरूले अर्को विश्व भ्रमण गरेका थिए। यस भ्रमणको ढाँचा भित्र, "टोक्यो होटल" मा मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, उनीहरूले मन पराए, र कीवको भ्रमण गरे।
आफ्नो क्यारियरको दौडान, "टोक्यो होटल" केटाहरू रकर्सहरूबाट विकसित युवा कलाकारहरूलाई चकित पार्न। यो बिल कलिट्जमा धेरै स्पष्ट छ । तथापि, तिनका भाइ टमले पनि केहि परिवर्तन गरे। तर विस्तार गर्न विचार विधेयक को शैली को विकास, जसले आफ्नो करियर को सबै भाग को लागि पुरा तरिकाले केटी मोडेल संग भ्रमित भयो, अझै पनि अधिक रोचक छ।
2005 मा, साना कैलिट्ज सोलह थियो, र उनीहरु पहिले नै उनको आँखा र पेंसिल आँखामा भेला भएका एक रंगीन श्यामला थिए। बैंड को संगीत शैली पनि संकेत - एक असली भावनात्मक चट्टान आफ्नो अविस्मरणीय स्कीइ संग। सन् 1 993मा बालबालिकालाई एकदम कम भयो।
2006-2007 - बिल अझै अँध्यारो छ, तर उहाँको कपालको टाउकोमा उसले सेतो हाइलाइटलाई झम्किन्छ।
सन् 2009मा, बिलले तिनको भाइ जस्तो ड्रेडलिकहरू बनाउँदछ, तर अझै पनि कालो। जंजीरों र नखने चट्टानों देखि, एकल "टोक्यो होटल" ग्लैमर जान्छ: तंग चीजहरु, छाला र furs (कृत्रिम, Kaulitz भाइहरु जनावरहरु को हत्या को पहिचान नहीं)।
2010 मा, ओडिगाइनी को उपस्थिति फैशनेबल हुन्छ। बिल कटौती र एक असीमित शैली मा बाल राख्छ, टोपी पहनता छ र DSquared को मोडेल शो मा भाग ले पहिले देखि नै यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उहाँले प्लेटफार्महरू र ऊँची एन्टिभेट्स पहनाउनुहुन्छ र यस्तो छविमा एकदम राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ।
2012-2015 - चित्रमा नाटकीय परिवर्तनको वर्ष: एक छोटो कपाल कट्टर, एक गोला र दाढ़ी, र यसका अलावा, "कुनै" प्रसाधन सामग्री र ऊँची एन्टर। तिनीहरू खेलकुदहरू द्वारा प्रतिस्थापित हुन्छन्। यो शैलीमा ट्राफिकले बिलको रूपमा आफ्नो भाइलाई जस्तै बनाउँछ। ठूला टिमको सानो र हिप-ह्याप्पो कपडाको स्पष्ट स्त्री स्त्री मार्गको साथ ट्विन्सहरू पहिले पहिले नै समान थिएनन्।
र बाँकी के हो?
टम Kaulitz, एक लामो समय को लागि dreadlocks, पसीना र पैंट संग "मोटोले", आफ्नो कपाल काट, तर एक दाँत पाएको छैन। अब ऊ अँध्यारो छ।
जर्ज लिस्टिङ, जसको कपालको मुखले पनि केटीलाई नाच पारेको थियो, यसलाई पनि भाग लिने निर्णय भयो। यसको अतिरिक्त, एक पूर्ण बास प्लेयरले आफूलाई हेरचाह गर्यो, वजन गुमायो र पप अप। जर्ज धेरै पुरानो र अधिक म्यानुअल देखिन्छ।
र केवल Gustav शेफर सालों को लागि परवाह छैन: त्यो पूर्व हो, बाहेक एक सानो दाखिला संग, यसको उपस्थिति धेरै परिवर्तन छैन। तथापि, त्यहाँ केही परिवर्तनहरू छन्, तर शैलीको क्षेत्रमा होइन। ड्रमर "टोक्यो होटल" उनको प्रेम पाईयो र विवाहित भयो।
प्रेमको अगाडिको बायाँका सदस्यहरू यति स्थिर छैनन्: टोकियो होटल ग्रुपको स्थायी बास खेलाडी, गिटारवादक वा सोसाइटीले स्थायी सम्बन्ध पाएन। केटाकेटीको व्यक्तिगत जीवन, वास्तवमा, क्यामेराको दृश्यबाट लुकेको छ, यद्यपि विधेयकले हालै लिसा वेंन्डपम्पको साथ हेरिएको थियो। तर त्यहाँ 25 वर्षीया कालिट्ज र 54 वर्षीया लिसाको बीचमा केहि कुरा छ, पपराजजीले मात्र अनुमान लगाउन सक्छ।
"टोकियो होटल": समूहको समीक्षा
"टोक्यो होटल" को बारे मा राय दुई पुरा तरिकाले विपरीत शिविरहरुमा विभाजित छ। यस लेखमा संगीतकारहरूलाई देखापर्यो, बरु, उनीहरूका प्रशंसकहरूको दृष्टिकोणबाट: वास्तवमा 2005-2007 मा। तिनीहरूले उनीहरूको असंख्य संख्याहरू हासिल गरेका थिए (विशेषतया किशोरीको महिलाहरु बाट)। हिरोइनको रूपमा। मजाकका वस्तु "बालबालिका" सामूहिक धातुले धातुका कामदारहरू, अधिक "कडा" संगीतका प्रशंसकहरू द्वारा गरे। 2006 मा, पुरुषको म्याग्दी एफएचएमले सबैभन्दा असीमित प्रसिद्ध महिलाहरूको सूचीमा बिल कलिट्ज समेत समावेश गरेको थियो।
"टोक्यो होटल" मा अनगिन्ती परेडहरू भएको थियो: दु: खको लागि प्रजनन भूमि हुनका लागि समूह सबैजना सबै भन्दा फरक फरक थिए। तर कसैलाई उनीहरुले चर्चा गरेका थिए, जसले उनीहरूको लोकप्रियताको कुरा गर्छ।
बैंडको क्यारियर अझै समाप्त भएको छैन। आराममा, न त कुटुलीहरू र तिनीहरूका स्थायी बासिस्ट र ड्रमर जाँदैछन्। कसलाई थाहा छ, सायद सङ्गीतकारहरूले अझै पनि पत्ता लगाउँछन् कि न केवल प्रशंसकहरू, तर पनि antifanates आश्चर्यचकित? सबै पछि, तिनीहरूले यसलाई एक पटक भन्दा बढी गर्न सक्थे, र तिनीहरूसँग अझै धेरै समय छ।
"अन्य नियमहरू" (समूह): सिर्जना, इतिहास र तिनीहरूका जीवनीको इतिहास
ईसुजु सवार - conservatism र शान संयोजन
शरद ऋतु सबैभन्दा catchability मा पाइक लागि मत्स्य पालन